AVI iPod: Sida loo Beddelaan AVI in iPod
> Resource > iPod > Sida loo Beddelaan AVI in iPod
Ma doonaysaa in ay ku riday files AVI ku saabsan qalabka video-karti iPod u madadaalada waqti kasta iyo meel kasta? Nasiib darro, dhammaan filimada AVI ma taageersana by iPod. Kaliya AVI footages la codec Motion jpeg la jaanqaadaan qalabka. Sidaas aad u badan oo filimada AVI ama videos kusoo bixi online oo aad rabto inaad u daawado aad iPod taabto, aad leedahay si loogu badalo AVI in iPod u waafaqsan ka badan.
Si aad u badalo qaab AVI in a qaab iPod-saaxiibtinimo, waxaad isticmaali kartaa tan smart Video Converter u Win (ama Video Converter u Mac ). Waxaa si toos ah aad bixisaa horena ah filaayo in iPod, taasoo u fududaynaysa si loogu badalo qaab video kasta oo ay u iPod ah oo ay taageerayaan qaab, si aad iyaga ka ciyaari kara qalabka iyada oo aan wax dhibaato ah. Dadka isticmaala Window, kaliya raac tilmaan-hoose si loogu badalo iyo ciyaaro AVI on iPod classic, iPod xiriiri talaabo talaabo ah. (Users Mac u Guide users Mac ' .)
Tallaabo 1: Ku dar AVI video in AVI in ay Converter iPod
Guji ka button ama u tag "Beddelaan" tab> "Add Files" menu xitaa dooro files AVI aad ka PC inay ku shuban. Laakiin haddii AVI aydan xaraysan aad rabto in aad si loogu badalo waxaa lagu at anfacaya, waxaad isticmaali kartaa hab fudud si ay u dajiyaan. Just si toos ah jiidi oo iyaga hoos u app this.
Talaabada 2: Calan qaab ku habboon wax soo saarka u iPod
Waxba ma ahan wixii nooca iPod aad leedahay, app this bixisaa ah qaab wax soo saarka filaayo in qalab aad. Waxaad aadan dhigay goobaha adag, kaliya ka dhacay icon Qaabka ka dibna dooro model qalab ee "Apple" qaybta.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta diinta, haddii aad rabto in lagu daro qabow qaar saamayn, watermark ama subtitles iwm, waxaad isticmaali kartaa hawlaha ay tafatir awood badan. Tag ah Video Converter goobta si ay u arkaan talooyin dheeraad ah oo ku tafatir sida jarida, lana siii, iwm biirtay ka.
Tallaabo 3: Ka billow si loogu badalo AVI in iPod
Ka dib markii ay wax walba oo la sameeyo, riix "Beddelaan" si loogu badalo AVI in qaab iPod-friendly. Markii diinta la sameeyo, waxaad ka dhacay karaa "Folder Open" ikhtiyaarka ugu hooseysa in la furo galka iyo ka heli faylasha la gediyay waxaa. Hadda, aad jiidi karaan faylasha wax soo saarka si ay u Lugood ka dibna u hagaagsan in iPod. Waxaa la samayn.
Top 5 iPod in Computer Transfer Tools
Sida loo saar Pictures on iPod la Zero Loss